"Fony mbola zaza aho, dia niteny toy ny zaza, nihevitra toy ny zaza, nisaina toy ny zaza; fa nony efa lehibe aho, dia nariako ny fahazazana." 1 Korintiana 13:11
"Fa izao no lazain'i Jehovah : ... Tahaka ny olona ampiononin-dreniny no hampiononako anareo." Isaia 66. 12:13
Tahaka ny ankizy rehetra, dia manana «popety» izay tena tiany tokoa i Aina keliko. Manan-danja lehibe aminy io nounours kely rovitra sy maloto io. Ilainy io mba hahitany tory sy mba hananany antoka. Fa tamin'ity hariva ity kosa, dia tsy hita ilay izy. Nitomany i Aina, tsy azo nampanginina. Inona no hatao?
Omeko tsiny ve izy noho ny alahelony? Hohazavaiko aminy ve fa tsy misy dikany iny voro-damba kely iny? Ka tokony tsy hitomany intsony izy, fa tokony hisaina toy ny olon-dehibe? Sanatria! Izaho, reniny, dia hikaroka ilay «popety» sarobidy hatraiza hatraiza, satria ny faniriako aloha dia ny hampionona azy. Rehefa lehibebe izy dia hahay hisaraka amin'iny ihany. Fa ankehitriny izy dia mbola kely loatra. Ho azy, ny fahaverezan'ilay «popetiny» dia tena mampalahelo mihitsy.
Ry namana kristiana, miresaka amin'Andriamanitra isika mikasika ny zava-dehibe. Fa matetika loatra isika no misalasala raha hiresaka aminy momba ny alahelo madinidinika manjo antsika. Tsy sahy isika, satria mihevitra fa tsy misy dikany izy ireny, ka hanome tsiny antsika Andriamanitra, noho isika manome lanja azy ireny. Marina fa mila mitombo amin'ny finoana isika, mba hahazoantsika mijery tahaka Azy. Saingy Ilay "Rain'ny famindrampo" sady "Andriamanitry ny fampiononana rehetra" (2 Korintiana 1:3) no manoloana antsika. Tsy manao tsinontsinona ny zava-manahirana antsika andavanandro Izy. Ho antsika dia lehibe izy ireny, ary fantatr'Andriamanitra izany.
Omeny lanjany ny fitantarantsika aminy ny tsiambaratelontsika, na dia efa fantany avokoa aza ny zavatra rehetra. Aoka àry isika hiresaka aminy momba izay rehetra manahirana antsika, ka hatoky Azy tahaka ny zaza.